कहिलेसम्म सहने विभेद ? — JagaranMedia.Com
कहिलेसम्म सहने विभेद ?
प्रकाशित : २०७७/२/२२ गते
नेपालमा दलितहरुको जनसंख्या झण्डै ७० लाख हराहारिमा रहेको विभिन्न संघसंस्थाले दाबी गर्दै आएका छन् । जसमध्ये धर्मका हिसाबले सबैभन्दा धेरै हिन्दु धर्म मानिरहेका छन। तर, धर्मका नाममा समाज भित्रको कुसंस्कार कुरिती, विकृति र अन्धविश्वास हाम्रा समाजमा जरो गाढेर बसेको छ । त्यसैको प्रतिफल दलित समुदाय जातीय विभेद र छुवाछूतबाट प्रताडित छ ।
रुकुम घटना जस्ता अन्य विभेदकारी घटनाका कारणले गर्दा सिङ्गो समुदाय न्याय हराएको भन्दै चिन्तामा छ । रुकुममा भएको घटना दलितको मात्र नभएर सबै मानव जातीको हो। दलित भएकै कारण वर्षौंदेखि अपमान, अपहेलना र अछुत मान्छे भनेर विभेदसँगै यो समुदाय शोषणमा पनि पर्दै आएको छ । शिक्षाबाट बञ्चित गराइएको छ । थुप्रै व्यवस्था फेरिए, ऐन कानून बने तर पनि २१ औं शताब्दीको यो समयमा पनि दलितमाथि विभेदका घटनाहरु बारम्बार भइरहनु ठूलो विडम्बना हो ।
विश्वव्यापी महामारिका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संसारभरी तहल्का मच्चाइ रहँदा दलित समुदायले जातीय विभेदको पनि सामना गर्नु परिरहेको छ । पुर्व मेचीदेखि पश्चिम् महाकालीसम्म जातीय छुवाछूतका घटनाहरु दिन दिनै बढी रहेको अवस्था छ। नेपाल सरकार र शासक वर्गले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कानून कार्यान्वयनमा खासै पहल गरिरहेका छैनन् । दलितमाथि भएको हत्या, हिंसा,विभेद र बलात्कारका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको देखिँदैन । यो उदासिनतामा मात्र नभएर दलित समुदायप्रति गरिएको अपमान पनि हो ।
तसर्थ यस्ता पिडा, कष्ट र असमर्थताको अवस्थामा सम्पुर्ण दलित समुदायका अग्रज नेता, अगुवा र शिक्षक वर्ग लगायत संचारकर्मी साथीहरुले एकजुट भएर आवाज बिहीनहरुको आवाजलाई अगाडि ल्याएर फेरि एक पटक लड्नु पर्ने अवस्था आएको छ । न्यायको पक्षमा सबै एकजुट भएर लड्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ । हामी जुन समाजमा जन्मीयौं त्यो समाजको उद्दार गर्ने हामी सबैको पहिलो कर्तव्य हो। सामाजिक दुरि र बहिष्करणमा पर्नुको पिडा कति हुदो रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको एउटा भाइरसले प्रष्ट देखाएको छ र सबैलाई अछुत बनाईदिएको छ ।
तर वर्षौंदेखि बहिष्करण र सामाजिक रुपमा अलग रहेर बस्नुपर्दाको पिडा केबल दलित समुदायलाई मात्र थाहा छ । कोरोनाले अछुत बनाएकाहरु त केही महिना वा वर्षका लागि सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्छन् । दलितहरुले त यस्तो विभेद वषौंदेखि भोग्दै आए । कानूनमा जेसुकै लेखिए पनि व्यवहारमा अझै विभेदमा परिरहेका छन् । त्यसैले दलितमाथि भएको विभेद र अन्यायका विरुद्ध फेरि एकजुट हुनु पर्ने बेला आएको छ ।
(लेखक प्रगतिशील नेपाली समाज भारतका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ)
जातिय बिभेद बिरुद्ध आमसंचार माध्यम अझै शशक्त भएर जाग्नु पर्नेमा जोड
अंगिरा पासीको न्यायका लागि दोस्रो दिन पनि प्रदर्शन
रुकुम पश्चिम हत्याकाण्डले नेपाली समाजलाई लज्जित बनायो
सुरक्षित क्वारेन्टाईन बनाउन प्रदेश सरकार जुटिरहेको छ : सामाजिक विकास मन्त्री बराल
Katwal Radio Magazine 2077-02-28
निष्पक्ष छानबिन,पिडितहरुलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही हुन्छ : प्रतिनिधि सभा सदस्य रसाईली
दैलेख : सेते दमाईको सालिक बन्ने
दैलेख – छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेको विषयमा नौ वर्षअघि हत्या गरिएका दैलेखका सेते दमाईको सालिक बन्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्...
आषाढ १८, २०७७
जातीय बिभेद बिरुद्धको सवालमा नेपाली आमसंचार माध्यमहरु पनि गम्भिर हुनु एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन । उनीहरुले जातिय बिभेदको मुद्धा...
आषाढ १९, २०७७
जातिय भेदभाव विरुद्ध बुटवलमा प्रदर्शन
वुटवल । देशैभर दलित समुदायमाथि भएको जातिय भेदभावका विरूद्व बुटवलमा शुक्रबार विरोध सभा सम्पन्न भएको छ । संयुक्त दलित संघर्ष...
रुकुम पश्‍चिम । रुकुम पश्‍चिमको मुसीकोट नगरपालिका ११ का नरीभान कामी काठको ठेकी बनाउन सिकिरहेका छन् । दूधबाट दही बनाउन...
बैकल्पिक शिक्षा लागु गर्न शिक्षकले अगुवाई र सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने : शिक्षाबिद प्रा.डा. कोईराला
शिक्षा बिद प्रा.डा. बिद्यानाथ कोईरालाले सरकारले ल्याएको बैकल्पिक कार्यानवयन गर्न शिक्षकहरुले अगुवाई , तीनै तहका सरकाले बिशेष पहल समन्वय गर्नुपर्ने...
सलह पसेपछि कपिलवस्तुमा तरकारी सखाप
बुटवल — कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–१० लोहरौलाका लालबहादुर केवट सोमबार रोपाइँमा व्यस्त थिए । त्यही बेला बोडी र करेलाबारीमा सलहको हुल पसेको...
आषाढ १७, २०७७
Katwal Radio Magazine 2077-03-17